DEG DEG:- Baarlamaanka Galmudug oo shaaciyay waqtiga la qaban doonno doorashada madaxweynaha - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Baarlamaanka Galmudug oo shaaciyay waqtiga la qaban doonno doorashada madaxweynaha
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in kulan ay maanta halkaasi ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ay isku raaceen waqtiga kama dambeyska ah ee la qaban doonno doorashada madaxweynaha maamulkaasi.
Xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa kulanka kadib sheegay in doorashada madaxweynaha maamulkaasi la qaban doonno 10-ka bisha April ee sanadkaan.
Qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo hore u shaaciyay in doorashada madaxweynaha Galmudug la qaban doonno 28-ka bishaan aynu ku jirno ayaa go’aankaasi iska badalay, islamarkaana qaatay go’aankaan cusub.
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo isna dalab u diray xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa go’aankaan ay soo saareen xildhibaanadaasi hareer marsan dalabkaasi ee ahaa in doorashada dib loo dhigo muddo 45 maalmood ah.
Madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa tan iyo markii uu shaaciyay inuu xilka iska casilay ayaa xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi dhexdooda waxaa ka bilawday kala qeybsanaan ku aadan arrimaha doorsahada madaxweynaha maamulkaas.
Illaa iyo haatan lama oga waxa uu ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ka dhihi doonno go’aankaan cusub oo ay soo saareen xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug, kaas oo hareer marsan dalabkii uu dhawaan u jeediyay ee ahaa in muddo 45 maalmood ah dib loo dhigo doorashada maamulkaas.